नेकपाको अर्थ मन्त्रीजी, यो के हो ?
माघ ९ गते मेची भन्सारले एउटा प्रज्ञापनपत्र भरेर त्यसैको आधारमा ३ ट्रक छाडिदियो । ट्रकमा के थियो ? न मेची भन्सारलाई थाहा छ, न अर्थमन्त्रालयलाई ।
मेची भन्सारबाट छुटेको ट्रक मोलमोलाई नमिल्दा बर्दिवासमा राजस्व अनुसन्धानले पक्राउ ग¥यो । ठूलै र शक्तिशाली नेता र मन्त्रीको मान्छेको परेछ, फोनमाथि फोन, दबाब ठूलै आएपछि राजस्वले पनि ट्रक खोल्न सकेन र पथलैया राजस्व कार्यालयमा पठायो । त्यो कार्यालयले समेत केही गर्न नसकेपछि ती ट्रकलाई काठमाडौं पठायो । बीच बाटोमा इधरका सामान उधर गरेपछि काठमाडौंमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पाउनुपर्नेजति आपत्तिजनक पदार्थ पाउने कुरै भएन । प्रशासनको यो एक नमूनामात्र हो । यस्ता काम दिनहुँ भइरहेछन् एयरपोर्टतिर, अन्य भन्सार नाकाहरुतिर । कसले पक्राउ गर्ने, कसले कानुन मान्ने ?
प्रधानमन्त्री हुनासाथ केपी ओलीले भनेका थिए– भ्रष्टाचारीलाई टपाटप टिपेर मिल्काउने हो, सुशासन र समृद्धि ल्याउने हो । १वर्ष बितेको छैन, सरकार गनाउन थालेको छ, सरकार कानुनभन्दा माथि देखिन थालेको छ । ०४६ सालपछिको कांग्रेसको १२ वर्षे कूशासनको झल्को ओलीको एकवर्षमै देखिन थाल्यो ।
समृद्ध ल्याउन ठूलो कुरा अनुशासन चाहिन्छ । जब संविधानको डर हुन्न, कानुनले काम गर्नै सक्दैन । लोकलज्जा नभएपछि त कानुनको अर्थ नै रहदैन । कानुन नभएको मुलुक अराजक हुन्छ, यतिबेलाको नेपाल अराजक छ । अराजकतालाई बढारेर सुशासन दिन र संविधान कार्यान्वयन गर्न आएको सरकारको यस्तो मतिभ्रष्ट काम गराइले नेकपाको नाक चटक्कै काटिन पुगेको छ ।
नाकावन्दी कालमा केपी ओली उभिएका थिए । त्यसैको प्रतिफल हो नेकपाले चुनाव जित्ने र एकलौटी सरकार बनाउनु । सरकार बनेपछि केपी ओली माफिया, विदेशी र आफन्तवीच नै लम्पसार परेका छन् । जो लम्पसार पर्छ, ऊ फेरि उठ्न सक्दैन । केपी ओली अव उठ्न सक्दैनन् किनकि तस्कर, माफिया, भ्रष्ट, अनियमित काम गर्ने गराउनेहरुले विजयको शंखघोष गर्न थालिसकेका छन् । रगत चाखेको प्राणीले फेरि फेरि रगत चाट्न खोज्छ भनिन्छ, भ्रष्टहरु भ्रष्टाचार गरिरहेछन् । यिनलाई अनुशासनको परिधिमा ल्याउनु अव ओलीका लागि असम्भव छ ।
यस्तो स्थिति भनेको नेकपाको ओह्रालो यात्रा हो । देशैभरिका अधिकांश निकायमा नेकपाको सत्ता छ । संघीयदेखि गाउँपालिकासम्मको सत्तामा भ्रष्टाचार र अनियमिततामात्र देखिनु भनेको चुनाव जितेको नेकपाको हार हो । हारेर लड्ने नेकपा फेरि कसरी जनविश्वासमा उठ्नसक्ला, उठाउने कसले ? चिन्ता लाग्यो ।